Maro ny adihevitra politika misokatra eo anatrehan’ny fihetsiky ny fiadidian’ny Kaominina ankehitriny, niainga tamin’ny fandravana tsena teo Analakely, izay namoahan’ny ben’ny tanàna teny mafy tamin’ny hoe : « vava samy manana », ary tsy izy no homena lesona. Maneho sy mivoy ny ben’ny tanàna fa manala ny kaominina ao anatin’ny gaboraraka sy ny tsy fanarahan-dalàna, saingy adihevitra ny hoe ao anatin’ny fotoanan’ny krizy tahaka izao ve no handrava sy hanimba fiainan’olona? Niampy ilay taratasy fampiomanana ny haino aman-jery MBS hiala ao anatin’ny 6 volana izay nanaovan’i Marc Ravalomanana valin-kafatra, dia mifoha ny fampahatsiahivana ny fampanantenana nataon’ny ben’ny tanàna tamin’ny fampielezan-kevitra. Isan’ireny ny fanafoanana ny Easy Park, fanavaozana ny tsena ka ambany ambony tsena ary ambany parking, fanaovana tsena goavana eny Anosibe sy Analamahitsy, fanaovana cantine scolaire isaky ny EPP, toeram-pivoahana miisa 250 hotratrarina ao anatin’ny taona voalohany hiasana, fampitomboana ny paompy (borne fontaine) ary atao maimaimpoana, toeram-ponenana na « logement social » 500 hotratrarina ao anatin’ny taona voalohany, fisokafan’ny orinasa fanodinana fako ao anatin’ny 3 taona. Mandeha ny fanakianana fa ny handrava ny nataon’ny teo aloha no toa maha maika.